Ra'iisal Wasaare Gaas Oo Maanta Booqday Xaruntii Ergada Ansixinta Dastuurka (Daawo+Sawiro) - jornalizem
Ra'iisal Wasaare Gaas Oo Maanta Booqday Xaruntii Ergada Ansixinta Dastuurka (Daawo+Sawiro)
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Dr.Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta booqday xaruntii Ergada Ansixinta Dastuurka Iskuul Polizia ee Magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya, Mudane C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa ka warbixiyay sida ay howshu u socoto islamarkaana tilmaamay inay si wanaagsan ay howshu u socoto, wuxuuna intaasi ku daray in Ergada Ansixinta Dastuurka iyo Gudigii Farsamada ay si wanaagasan u wada shaqaynayaan.
“Ra’iisal Wasaare howshu waxay u socotaa si wanaagasan waxaana guda galney doodii ku aadanayd Dastuurka waa laga dooday xeer hoosaadkii waana la ansixiyey, Dastuurkana waa loo wada akhriyey Ergada, waxaana howsha si hufan u wada Ergada Ansixinta Dastuurka iyo Gudiga Farsamada”.
Sidoo kale Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka ahna Wasiirka Ganacsigga iyo Warashadaha Xukuumada Soomaaliya Mudane C/wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa aad uga mahad celiyay howsha ay Ergada Ansixinta Dastuurka u hayaan Umadda Soomaaliyeed, wuxuuna wax lagu farxo ku tilmaamay sidii wanaagsanayd oo ay u ansixiyeen Ergada iyo Gudiga Farsamada ee Xeer hoosaadka Dastuurka Soomaaliya.
Ugu danbayntii Ra’iisal wasaaraha ayaa uga mahad celiyey Ergada sida wanaagsan ee ay u wajaheen howsha Ansixinta Dastuurka, waxa uuna kula dardaarmay maadaama uu wakhtiga cidhiidhi yahay inay dadaal muujiyaan waana ku faraxsanahay ayuu yidhi sida aad howsha u qaybiseen waxaana rajeynayaa inta dhimana inay si wanaagsan u dhamaystirmi doonto hadduu illaahay yidhaahdo.
Hadaba booqashadani ayaa qayb ka noqonaysa indha indhaynta iyo la socoshada arimaha dastuurka soomaaliya sida ay u socdaan waxaana ay madaxdu si aada ugu riyaaqeen sida ay u socoto hada howsha dastuurku....
Halkan Ka Daawo Sawiro………..